Global Voices teny Malagasy » Sonia manan-tantara nifanaovan’ny oniversite roa momba ny fanonerana ny fanandevozana any Karaiba · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Aogositra 2019 5:26 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Karaiba, Barbady, Jamaika, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tantara, Toekarena sy Fandraharahàna, Vaovao Tsara
Ny Oniversiten'i Glasgow any Ekaosy. Saripikan'i Hugo Cadavez, CC BY 2.0.
Nanao soniam-pifanarahana manan-tantara amin'ny fanonerana ny fanandevozana  ny mpitantsoroka-lefitra (Vice-Chancellor) avy ao amin'ny Oniversiten'i Antilles (UWI West Indies), ny Profesora Sir Hilary Beckles,  sy ny Mpiandraikitra Lehiben'ny fanatontosana asa ao amin'ny Oniversiten'i Glasgow, ny Dr. David Duncan — sambany no nisy fifanarahana tahaka izao hatramin'ny nanafahan'ny  Britanika tanteraka tamin'ny taona 1838 ireo vahoaka nandevozina.
Tsy mbola nisy mihitsy hatramin'izay izany hoe trano fianarana iray miorina ao amin'ny Fanjakana Mitambatra nahazo tombony tamin'ny fanandevozana  ka miala tsiny noho ny andraikiny tao anatin'izany  — ary mbola zava-dehibe kokoa noho izany — mametraka ny vola ao ambavany [izany hoe manentsina izany]. Natao araka izay mety, nosoniavina tao amin'ny foibem-paritra UWI tao Kingston, Jamaika, tamin'ny 31 Jolay 2019 — tamin'ny andro nampiharana  ny fanafahana tanteraka tamin'ny fanandevozana 181 taona lasa izay (sady eo am-pikarakarana ny fetin'ny fanafahana tamin'ny fanandevozana  [mg] izay ankalazain'ny maro ao amin'ny faritra rahateo) — ny fifanarahana mitentina £20 tapitriana ( $24.308.500 USD).
Io vola 20 tapitrisa io, izay saimbôlikan’ny vola  nandoavan'ny governemanta britanika ho an'ny  tompon'andevo ho fanonerana ny fanafoanana ny fanandevozana, dia ho ampiasaina amin'ny fikarohana sy ho amin'ny fisantaran-draharaha mifototra amin'ny fampandrosoana ifanaovan'ny oniversite roa tonta mandritra ny 20 taona ho avy, ka eo ambany fitarihan'ny Foibem-pikarohana fampandrosoana Glasgow-Karaiba  izay iaraha-manana sy mamelona, no hanatanterahana izany. Ny tanjona dia ny hahitana vahaolana amin'ny sasany amin'ireo fanamby manindry indrindra ara-pampandrosoana any Karaiba, ao anatin'izany ny toekarena , ny fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka  ary eny fa na dia ny lohahevitra momba ny mari-panondroana  ara-kolontsaina aza. Haorina amin'ny tobin'anjerimanontolo roa tonta amin'ny volana septambra 2019 izany foibe izany.
Mpitantsoroka-lefitry ny Oniversiten'i Antilles (West Indies), Sir Hilary McDonald Beckles (ankavia), sy ny tale mpanatanteraky ny FMI (Famatsiam-Bola Iraisampirenena) Christine Lagarde (ankavanana), tao amin'ny Oniversiten'i Antilles, Mona Campus tao Kingston, Jamaika 17 Novambra 2017. Sary FMI Photo/Krzystof Rucinski, CC BY-NC-ND 2.0.
Hatramin'ny taona 2013 , rehefa voafidy  ho [Filohan'ny] Vaomieram-Paritry ny Fanonerana CARICOM , mikendry ny “hanoritana ny lalan'ny fihavanana, fahamarinana, ary ny rariny ho an'ny lasibatry ny fanandevozana sy ny taranany” ny Sir Beckles, dia lohalaharana  izy amin'ny fandresen-dahatry ny faritra hitakiana fanonerana.
Tao amin'ny antsafa iray nivoaka tao amin'ny gazetibokim-paritra Caribbean Beat  tamin'ity taona 2019 ity, nilaza izy fa efa voatomboka ny vintany hatry ny maha-“zanaka Windrush ” azy “hiroboka amin'ny endrika maron'ny dia matroka”. Nanamarika ihany koa izy ny “fahefa-manova” ananan'ny University of the West Indies  (Oniversiten'i Antilles) — izay milahatra ao anatin'ny dimy isanjato tsara indrindra amin'ireo oniversite tsara indrindra manerana izao tontolo izao — amin'ny fananganana faritra mahazaka faharetana sy lovain-jafy:
Tao anatin'ny dimampolo taona, nahatsangana an'i Karaiba hivoaka amin'ny fakofakom-panjanahantany isika. Hafa mihitsy ny lohahevitra (olana) manoloana antsika amin'izao fotoana izao. Anjara andraikitra lehibe notanan'ny UWI ny nampahazava io fotoana manan-tantara io sy mamelatra fifanakalozan-dresaka momba ny atsasa-taonjato manaraka. […] Ny nifantohako hatramin'izay dia teo amin'ny fivoarana ara-toekarena sy ny anjara toerana azon'ny fanabeazana idirana amin'ny fanovana ny toekaren'ny fiarahamonintsika. […]
Mifandray amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ny fanonerana. […] Izaho no filoha lefitry ny tetikasan'ny UNESCO momba ireo Lalana Ankapobeny nitondrana ny andevo, filohan'ny vaomieran'ny fanonerana ao amin'ny CARICOM, miaraka amin'ireo mari-boninahitra hafa. Izaho no tompon'andraikitra amin'ny fandrafetana sori-joro hanaovana fikarohana momba ny fanandevozana eo amin'ny fototra manerantany. Efa nandany fotoana maro aho tany Afrika, Amerika Latina ary Azia mitady ny fomba nahasandrahaka manerantany ny fanandevozana ny mainty. Mifandray daholo ny zava-drehetra. Manana anjara i Britaina amin'ny fakana ny vola sasany nononoiny avy ao Karaiba hahabe voho azy. Rehefa vitany ny fanovana tanteraka, dia nilaozana tamin'ny vokatry ny fitrandrahana isika. Mihevitra aho fa manan-jò isika! Mila miverina mijery ny heloka vitany i Britaina, ary mandray anjara amin'ny fanadiovana ny korontana navelany.
Ao anatin'izao fandosirana tsy mitsahatra  ataon'ny Fanjakana Mitambatra (UK) amin'ny resaka fanonerana  izao, dia arahabaina  ho voa famafy  ity Takela-pahatakarana  ifanaovana amin'ny Oniversiten'i Glasgow ity. Notehafan'i Sir Beckles ny fijoroan'ny Oniversiten'i Glasgow fa “tsy ho tsara dia tsara ny oniversite iray rehefa tsy manana etika,” ary nampiany  fa nametraka ilay toeram-pianarana ho amin'ny “sehatra avoavo kokoa ara-maoraly” ilay fifanarahana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/12/142511/
 fanonerana ny fanandevozana: https://newsday.co.tt/2019/08/03/uwi-university-of-glasgow-sign-reparation-mou/?fbclid=IwAR1QTqo9mDJ6OWncmwn2Mp_tDO2t_jIDKQ8dXIjFG3BGVJPQiMOfrvRHFxY
 Profesora Sir Hilary Beckles,: http://www.uwi.edu/vcbiography.asp
 nahazo tombony tamin'ny fanandevozana: https://www.amren.com/news/2018/09/glasgow-university-benefited-from-proceeds-of-slavery-by-almost-200-million/
 ny andraikiny tao anatin'izany: https://www.theguardian.com/world/2018/sep/22/glasgow-university-wealth-from-transatlantic-slave-trade-reparations
 ny fetin'ny fanafahana tamin'ny fanandevozana: https://mg.globalvoices.org/2019/08/06/142343/
 ny vola: https://www.rt.com/uk/418814-slave-compensation-bristol-taxpayer/
 ho an'ny: https://www.instagram.com/p/BgAZ_EsHOSs/
 Foibem-pikarohana fampandrosoana Glasgow-Karaiba: https://www.jamaicaglobalonline.com/reparation-for-slavery-at-last/
 fikarakarana ny fahasalamam-bahoaka: https://globalvoices.org/2014/03/10/midwives-take-action-on-no-dads-allowed-rules-in-trinidad-tobago/
 Vaomieram-Paritry ny Fanonerana CARICOM: http://caricomreparations.org/
 University of the West Indies: https://www.facebook.com/centreforreparationsresearchuwi/?ref=br_rs
 fandosirana tsy mitsahatra: https://globalvoices.org/2015/10/01/jamaicans-are-unimpressed-with-the-uks-pish-posh-attitude-on-slavery-reparations/
 resaka fanonerana: https://www.facebook.com/watch/?v=1236112956457421
 voa famafy: https://uwitv.org/uwi-news/20-million-caribbean-reparations-agreement?fbclid=IwAR0H1LL3AK_9jGeoqiqTpDCnxmNokWDCrO5E_IBEEotZoW9fggPIaq0UTl4
 ary nampiany: https://wicnews.com/caribbean/uwi-signs-20-million-caribbean-reparations-agreement-glasgow-university-234521290/?fbclid=IwAR1RcgU6Zesd9G62H8TkahfrtQ5sX2wdNBCovf8duw-3Mjoyjmx1qxkTy-Y